अस्पतालमै पुण्य माथि बिशाल डनले हात हालेपछि ! पिडितको पैसा किन नदिएको भन्दै थर्काए (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अस्पतालमै पुण्य माथि बिशाल डनले हात हालेपछि ! पिडितको पैसा किन नदिएको भन्दै थर्काए (भिडियो सहित)
अस्पतालमै पुण्य माथि बिशाल डनले हात हालेपछि ! पिडितको पैसा किन नदिएको भन्दै थर्काए (भिडियो सहित)
admin February 10, 2020 भिडियो, समाचार	0
केहि दिन अगाडि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा विरामी परेपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि पुगेका पुण्य गौतम माथि अस्पताल परिसरमा पनि आ क्रमणको प्रयास भएको छ । रातिमा ज्वरो आउने, वान्ता आउने हातखुट्टा दुख्ने लगायतका समस्या भएपछि वीर अस्पतालमा पुगेका उनले त्यहाँ वेड नपाएपछि नेपाल मेडिकल कलेज पुगेको बताएका छन् । उनले आफुलाई मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि सुझाव दिइए पछि त्यहाँ पुगेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न गतिविधि गरेर चर्चामा आइरहन मनपराउने गौतम अहिले पीडितकै उपचारका लागि देश विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको पैसा हिनामिना भएको भन्दै विवादित भएका थिए । तर उनले एउटा पीडितका लागि भनेर पठाएको रकम अर्का निकै आपतकालिन अवस्थाका विरामीलाई सहयोग दिएका कारण आफुलाई विवादित बनाइएको दावी गरेका छन् ।
उनलाई बचाउन केही अन्य ब्यक्ति पनि मिडियामा आएका छन् । मलाई निकै अप्ठेरोमा परेको बेलामा पुण्यले सहयोग गर्नुभएको हो भन्दै अन्य दुईजना ब्यक्ति मिडियामा आएका हुन् । उनले मिडियाका सामु पनि म्रिगौला पीडितलाई एक हजार रुपैया सहयोग गरेका थिए ।
उनले आफु स्वस्थ्य भएपछि आफु माथि आ क्रमण गर्नेलाई कानुनी कारवाहीका लागि प्रकृयामा जाने पनि बताएका छन् । केही दिन अघि उनी अन्तरवार्ताका क्रममा पनि वे होस भएर ढ लेका थिए । उनले भक्तपुरको अस्पतालमा उपचारका लागि रहेका एक जना बालकलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको बताएका छन् ।
केही ष’डयन्त्र’कारीहरुले पीडितलाई पुण्यले दिएको पैसा पनि नलिनु भनेर बताएका कारण उनीहरुले आफुले दिएको सहयोग पनि नलिएको बताए । अब आफु प्रहरी प्रशासनका ब्यक्ति समेत लिएर भक्तपुर अस्पताल जाने पनि बताएका छन् । पुण्य गौतमले मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदा दिंदै विशाल डनको मान्छे हौं भन्ने ब्यक्ति के हो यो किन मान्छे खाएको भन्दै ? प्रश्न गर्न पुगेका थिए । उनको हुलीया हेर्दा पनि अनौठो देखिन्थ्यो ।
०७६ माघ २८ गते मंगलबार ई. स. २०२० फेब्रुअरी ११ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
गरे के हुदैन रहेछ? श्रीमानकाे ५० लाख लिएर कुमारसँग भागेकि नकुलकि श्रीमति भारतकाे केरलामा यसरी बाटैमा भेटिएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
गाई का’टेर भाग लगाउँदै गरेका चारजनालाई चिन्नुहाेस्
लाहुरेकि श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन्: “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित)
दुई महिना अघि मलेसिया पुगेका यमबहादुरको म्यानपावर र कम्पनीको लाप’रवाहीले समयमै उपचार नपाउँदा गयो ज्यान !